आज मंगलबार पत्याउनै नसकिने गरि परिवर्तन भयो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस कति पुग्यो : – AB Sansar
May 11, 2021 Admin01LeaveaComment on आज मंगलबार पत्याउनै नसकिने गरि परिवर्तन भयो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस कति पुग्यो :
***यो समाचार को भिडियो अन्तिममा छ *****काठमाडौँ । सोमबार सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ ।।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बढेर ९२ हजारमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि आइतबार छापावाला सुन तोलाको ९१ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रहेको छ ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैँयाले बढेर प्रतितोला १३६० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला *यो पनि:- गनेश भगुवानको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस। आज वैशाख २८ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
ढिस्कोमा पुरिएर १३ वर्षीय बालकको मृत्यु
स्नताक तहको रिजल्ट दुई दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने त्रि.वि. को तयारी
कोरो’नाले नि’धन भएको भनिएका ब्यक्तिको आँ’खा छै’न, घाँ’टीमा पनि गहि’रो चो’ट !